- राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका लागि गोलाप्रथा, कसरी गरिन्छ त गोलाप्रथा ?
राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका लागि गोलाप्रथा, कसरी गरिन्छ त गोलाप्रथा ?
काठमाडौंः संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका लागि असार ४ गते गोलाप्रथा गरिने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेको संघीय संसद् सचिवालयले अब सदस्यको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको हो ।
५९ सदस्य रहने राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक चौथाइ सदस्यको कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ भने सदस्यको कार्यकाल दुई, चार र छ वर्षको हुने गर्दछ । नियमावली अनुसार पहिलो दुई वर्षमा १९ र चार तथा छ वर्षमा २०र२० जना सदस्यको कार्यकाल सकिनेछ ।
राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने सबैको क्लस्टरअनुसार नै चरणबद्ध रूपमा गोला गोलाप्रथा हुनेछ ।
राष्ट्रियसभामा सदस्यको पूर्ण कार्यकाल छ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थायी सदन राष्ट्रियसभामा पहिलो दुई वर्षमा पदावधि सकिने सदस्यको स्थानमा पुनः निर्वाचन भई सदस्य थपिँदै जानेछन् । स्थायी संरचना भएकाले सदस्यको रिक्तता भने हुने छैन ।
कसरी गरिन्छ त गोलाप्रथा ?
हाल राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहेका छन् । उनीहरु प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गरेका ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सदस्य हुन्।
प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका ८ जनामा खुला ३, महिला ३, दलित १ र पिछडिएका वा अपाङ्गता भएका मध्येवाट १ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यबस्था छ ।
नियमावलीमा भएको कार्यविधि अनुसार सबै क्लस्टर र प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि प्रदेशगत रूपमा खुला, महिला, दलित एवं पिछडिएको क्षेत्र र मनोनीतको फरक–फरक रूपमा गोलाप्रथा हुनेछ ।
खुला तर्फबाट एउटा प्रदेशबाट निर्वाचित भएका ३ सदस्यका लागि गोलाप्रथा हुनेछ । यसरी गोलाबाट कुनै एक प्रदेशका ३ सदस्यको कार्यकाल क्रमशः दुई, चार र छ वर्ष कायम हुनेछ । यसैगरी सबै प्रदेशमा क्लस्टरअनुसार गोलाप्रथा हुनेछ । एउटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन क्लस्टरका लागि तीन चरण नै गोलाप्रथा हुनेछ ।
मनोनीत तीन सदस्यको पनि गोलाप्रथा हुनेछ । मनोनीत तीन सदस्यको पनि दुई, चार र छ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ महिला सदस्यको हकमा पनि प्रदेशगत रूपमा गोला हालिनेछ । एक प्रदेशका तीन महिला सदस्यको कार्यकाल क्रमशः दुई, चार र छ वर्षको नै हुनेछ ।
दलित क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रत्येक प्रदेशका १–१ जना गरी हुने सात सदस्यमध्ये २ जनाको २, अर्का २ जनाको चार र थप २ जनाको ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । एक जनाको कार्यकाल शून्य वर्ष कायम गरिनेछ । यस्तै अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ७ सदस्यमध्ये पनि दुई जनाको दुई वर्ष, अर्का २ जनाको चार र थप दुईको ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । बाँकी एकको कार्यकाल शून्य वर्ष मानेर लगत कायम गरिनेछ ।
यसरी दलित र अल्पसङ्ख्य वा अपाङ्गता भएकाको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरी शून्य लगत कायम गरेका दुई जनाबीच गोला हालिनेछ जसमा एक जनाको कार्यकाल चार वर्षको र अर्को एक जनाको कार्यकाल ६ वर्ष कायम हुनेछ । गोलाप्रथा गर्दा सदस्यलाई वर्णानुक्रमअनुसार चिट्ठा तान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चिट्ठा तान्नका लागि सदस्य स्वंयम उपस्थित नभएको अवस्थामा अख्तियार प्राप्त व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्नेछ ।